Shiinaha Jiilkii ugu dambeeyay ee 1.8T ee qaboojinta uumi-baxa ee WHIMS iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huate
Jiilkii ugu dambeeyay ee caalamiga ah 1.8T qaboojinta uumi-baxa whiMS
Codsiga:Mashiinka kala-soocida qoyan ee qoyan ee giraanta toosan ayaa si weyn loogu isticmaalay kala-soocida qoyan ee macdanta birta magnetic daciifka ah sida hematite, limonite, siderite, chromites, limonite, wolfram iwm iyo sidoo kale kala-soocidda birta ee nadiifinta macdanta aan birta ahayn, sida quartz , feldspar, nightline, fluorite, kaolin iwm.
1. Farsamada qaboojinta uumi-baxa waa tignoolajiyada cusub ee qaboojinta waxtarka leh iyo kharash badan.Waxay ku beddeshaa kulaylka iyada oo loo marayo marxaladda kala-guurka ee warbaahinta qaboojinta iyada oo leh dahaar sare iyo barta karkarinta hoose, ka dibna ku wareejiso kulaylka si ay u qaboojiso gariiradaha kuleylka.
2. Institute of Electrical Engineering ee Shiinaha Academy of Sciences ayaa bilaabay cilmi-baarista codsiga on technology qaboojinta uumi tan iyo 1958. La shaqaynta cutubyo badan, waxa ay horumarisa in isku xigta codsiga in beerihii koronto, drive koronto, qalabka korantada hooseeyo. qalabka birta ka saara iyo macdanta.Farsamooyinkeeda cilmi-baarista aragtida iyo codsiga warshadaha ayaa ku jira heerka ugu horreeya ee gudaha iyo dibedda.Waxay leedahay xuquuqaha lahaanshaha garaadka oo madax banaan.
3. Mashruuca Saddexda Gorge ee cajiibka ah, waxa jira 2 qaybood oo ah 840MVA uumi-dhaliyeyaal qaboojineed oo ay HUATE ku baartay warshadda korontada ee dhulka hoosteeda.Waxa si rasmi ah loo hawlgaliyey Diisambar, 2011 iyo Luulyo, 2012. Tani waxay calaamad u tahay adeegsiga guusha leh ee tignoolajiyada qaboojinta uumiga.
Hore: Kala-saar Electromagnetic Slurry
Qalabaynta Mishiinka Kala soocida Macdanta Qoyan